၁၉ ကြိမ်မြောက် CPC ဗဟိုကော်မတီက ၆ ကြိမ်မြောက် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကျင်းပ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ ထျန်အန်းမင်ရင်ပြင်၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁ ရက်က ကျင်းပသော တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှစ်တစ်ရာပြည့် အထိမ်းအမှတ် အလံတင် အခမ်းအနားတွင် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
၁၉ ကြိမ်မြောက် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဗဟိုကော်မတီ(CPC)သည် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ပေကျင်းမြို့၌ ၎င်းတို့၏ ၆ ကြိမ်မြောက်မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကို စတင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ ထျန်အန်းမင်ရင်ပြင်၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်က ကျင်းပသော တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတည်ထောင်ခြင်း ၇၂ နှစ်မြောက် အလံတင်အခမ်းအနားမြင်ကွင်းအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(CPC) ဗဟိုကော်မတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရှီကျင့်ဖိန်က CPC ဗဟိုကော်မတီ၏ နိုင်ငံရေးဗျူရိုကိုယ်စား အလုပ်အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို တင်သွင်းခဲ့ပြီး CPC ပါတီ၏ နှစ် ၁၀၀ ကာလ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများမှ အဓိကအောင်မြင်မှုများ နှင့် သမိုင်ဝင်အတွေ့အကြုံများအပေါ် ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုရေးဆွဲပြဌာန်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့သည့် CPC ဗဟိုကော်မတီနိုင်ငံရေးဗျူရို၏ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအရ ယခုကျင်းပသော ကော်မတီမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကို နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံရေးဗျူရိုအစည်းအဝေးသည် လေးလေးနက်နက်သုံးသပ်ရန်အတွက် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးသို့ ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းသွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(CPC) သည် လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုသမိုင်းကြောင်းတွင် နှစ်လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကာလအတွင်း မှတ်ကျောက်တင်ခံရသည့် အောင်မြင်မှုများစွာကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ၌ နိုင်ငံ၏ လူမျိုးစုအားလုံးကို ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း အောက်တိုဘာ အစည်းအဝေးအပြီး ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်ထဲတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်ပြည်သူများသည် ခေတ်သစ်အစပျိုးချိန် ၁၈ ရာစုအစောပိုင်းကာလကတည်းက အနိုင်ကျင့်မှု နှင့် လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်မှုကို ကြုံတွေ့ ခံစားခဲ့ကြရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ခေတ်မီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ဦးတည်ချီတက်လျက်ရှိရာ ကြုံတွေ့ရသောအရာအလုံးအားလုံး နှင့် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်သည် ကမ္ဘာ့လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးနိုင်ငံတွင် အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံသည် အချိန်ကာလနှင့်အတူ ရင်ဘောင်တန်းကာ အရေးပါသော တိုးတက်မှုများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသားများသည် အမျိုးသားသွေးသစ်လောင်းမှု၏ တောက်ပသော အသီးအပွင့်ရလဒ်များကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဦးဆောင်အကြီးအကဲ မော်စီတုန်း ၊ တိန့်ရှောင်ဖိန် ၊ ကျန်စီမင်း နှင့် ဟူကျင်ထောင်း တို့နှင့်အတူ တရုတ်ကွန်မြူနစ်များသည် အဖိုးတန်လှသော အတွေ့အကြုံကောင်းများနှင့်အတူ တော်လှန်ရေး ၊ တည်ဆောက်ရေး နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုများအတွက် ပါတီတစ်ရပ်လုံး နှင့် မျိုးနွယ်စုအားလုံးရှိ လူများကို ဦးဆောင်မှုပေးခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၁၈ ကြိမ်မြောက် CPC အမျိုးသားကွန်ဂရက်ကတည်း ရှီကျင့်ဖိန်သည် CPC ဗဟိုကော်မတီနှင့်အတူ မှတ်ကျောက်တင်အောင်မြင်မှုအသစ် နှင့် အဖိုးတန်လှသောအတွေ့အကြုံသစ်များ စုဆောင်းခြင်း လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပါတီတစ်ခုလုံး နှင့် မျိုးနွယ်စုအားလုံး၏ ပြည်သူများကို အဓိကဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုခဲ့သူဖြစ်သည်။
တရုတ်လူမျိုးတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်အတူ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်သည် ၎င်း၏ ခိုင်မာသောစွမ်းအားကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပါတီ ၊ စစ်တပ် နှင့် ပြည်သူများသည် ယခင်ကလုံးဝမရရှိခဲ့ဘူးသော စည်းလုံးညီညွတ်မှုမျိုးကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာအဆင့်ရပ်တည်ချက်များတွင် ခိုင်မာတောင့်တင်းခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်းအင်စတီကျူးရှင်းများ ပိုမိုခိုင်မာလာခြင်း ၊ အခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်မာတောင့်တင်းလာခြင်း နှင့် ကနဦးအစပျိုးဖော်ဆောင်မှုကို ကျယ်ပြန့်စွာလုပ်ဆောင်ရာတွင် စိတ်အားထက်သန်မှု အရင်းအမြစ်တစ်ခုရှိခြင်းတို့နှင့်အတူ ထိုအချက်များအားလုံးသည် အမျိုးသားသွေးသစ်လောင်းမှုအကြောင်းအရင်းကို စီမံ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
သန္နိဌာန်စိတ်ခိုင်မာစွာဖြင့် ရုန်းကန်ခဲ့ရစဉ် ကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင် ပါတီ နှင့် တရုတ်ပြည်သူများသည် ကမ္ဘာကြီးအား တရုတ်နိုင်ငံသည် ထိုးဖောက်ရုန်းထလာခြင်းမှ အလွန်ကြီးမားသော အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပုံ နှင့် အကျိုးစီးပွားတိုးတက်လာရာမှ ခိုင်မာတောင့်တင်းလာပုံတို့ကို ပြသနိုင်ခဲ့သလို တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားသွေးသစ်လောင်းမှုသည် သမိုင်းတွင် ရှောင်လွှဲ၍ မရနိုင်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
ဥပဒေကြမ်းထဲတွင် ပါတီအတွင်း/အပြင် နှစ်ရပ်စလုံးမှ အမြင်များ နှင့် အကြံပြုချက်များကို စုဆောင်းထားကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင်ရှီသည် CPC မဟုတ်သော နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ဗဟိုကော်မတီများမှ ခေါင်းဆောင်များ ၊ All-China Federation of Industry and Commerce ၏ အကြီးအကဲ နှင့် ပါတီလက်ဆုတ်လက်ကိုင်မရှိသော ပြည်သူ့အသံ ကြားနားမှု ဆွေးနွေးမှုတွင်လည်း ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားသည်။
ယင်းဥပဒေကြမ်းသည် ၁၉ ကြိမ်မြောက် CPC အမျိုးသားကွန်ဂရက် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ ဒေသအသီးသီး ၊ ဌာနအသီးသီး နှင့် ဘက်အသီးသီးမှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုခြင်း ရရှိထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Nov. 8 (Xinhua) — The 19th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) started its sixth plenary session in Beijing on Monday.
1-The national flag guards march duringaflag-raising ceremony atagrand gathering celebrating the centenary of the Communist Party of China (CPC) at Tian’anmen Square in Beijing, capital of China, July 1, 2021. (Xinhua/Xing Guangl
2-A flag-raising ceremony to celebrate the 72nd anniversary of the founding of the People’s Republic of China is held at the Tian’anmen Square in Beijing, capital of China, Oct. 1, 2021. (Xinhua/Chen Zhonghao)